Haddii aad doonaya in ay daawadaan cajiib ah 4K videos on your computer monitor widescreen weyn, ama aad casriga ah, isagoo xoogaa yar oo software in ay awood u ciyaaro qaab caan oo loo isticmaalo this ee aalladda sare qeexidda video habsami leh uga dhigi doonaa farqiga dhan ee inta aad ku raaxaysan waayo-aragnimo ah. Laakiin ma ahan oo kaliya 4K videos in ay u badan tahay in aad rabto in lagu ciyaaro - videos HD si joogta ah ayaa sidoo kale caddeyn karto dhibaato badan ciyaartoyda video. Arrimaha sida rafaad iyo incompatibility codec ayaa weli baahsan, taas oo ah sababta helo, barnaamij heer sare ah oo lagu kalsoonaan karo karti ciyaaryahan video waa muhiimada sare sida.
Inkastoo 4K videos lagu qaybiyey in ka badan sidii hore sida technology uu noqdo si baaxad weyn oo qiimo jaban lagu heli karaa in filim hiwaayadda, weli barnaamijyo badan ciyaaryahan video aan u taageeraan aadan. Hoos waxaad ka heli doontaa liiska oo sharaxaad ka mid ah shan ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican video 4K haatan ku jira halkaas. Waxaan rajaynayaa in tani ay kaa caawinaysaa in aad si sax ah u doorato u 4K baahidaada arkaysid!
Ma u dallacsiiyey ay awoodaan in ay gebi ahaanba la ciyaari video kasta oo ay ka jirto. Waxay kor xaqiiqada ah in ciyaaryahanka uusan silci ka dhibaatada aad caadi u ah in inta badan dadka soo maray hal mar ah ama mid kale; in in uu yahay awood la'aanta ciyaaryahan video si ay u awoodaan in ay si guul leh u ciyaari qaabab video gaar ah, ama xataa qaabab ugu badan oo caan ah kuwaas oo laga yaabo in lagu encoded ka duwan. Cabasho kale oo caadi ah ciyaaryahanka video software waa in files wuxuu qaadan karaa waqti dheer in la furo, ama ciyaaro hab .Weli. Cadibo Wondershare ayaa sheegaya in ciyaaryahankaan uusan haysan arrimaha sida, iyo in dhammaan videos dhakhso iyo muuqan ciyaaro.
Wondershare Player Waxaa laga heli karaa labada nidaamka Windows iyo sidoo kale Mac OS X, oo dhawaan la sameeyey qalabka Android heli karaa sidoo kale. Ciyaaryahanka ma aha oo kaliya video files, laakiin sidoo kale u ciyaara kasta oo file maqal ah iyo sidoo kale. Taageerayaan qaabab video ka mid ah AVI caanka ah, MPEG, wmv iyo MKV (kaliya la magacaabo wax yar). Intaa waxaa dheer, subtitles on videos sidoo kale soo bandhigi doonaa si sax ah ee qaabab oo dameer, SSA iyo SRT.
MP3, WMA, FLAC, M4A, AAC iyo qaabab kale audio waxaa taageera.
Hal ku dhiga ah Wondershare Player waa "wax walba xaq u ciyaara, markii oo dhan". Waxa uu ku siinayaa nabadda ee maskaxda in xitaa kuwa files video in aad awood uma yeelan in la ciyaaro software kasta oo kale, runtii si fiican u la Wondershare shaqayn karo.
Wondershare Player Waa free download iyo nasiib wanaag, ka duwan ciyaartoy badan oo lacag la'aan ah, ma soo dhexgelin marka aad waayo-aragnimo la baaritaan ama xayaysiisyada pop.
Ciyaaryahan kale oo si fiican u yaqaan in ay awoodda in ay dib ugu ciyaaro files iyo codecs keeni kara barnaamijyada kale ee ay ku guuldareysato waa ciyaaryahan VLC. Ciyaaryahanka waxa loo danbeyey oo la cusbooneysiiyey si loogu daro taageero u 4K video loo maqli karo in version 2.1. Ciyaaryahanka ayaa waxa uu leeyahay taageero kala duwan oo aad u badan oo codecs, taas oo suurto gal ah in dib shiidaa ciyaaro nooc kasta oo file video (iyo sidoo kale audio).
VLC Player loo heli karaa lacag la'aan ah Mac OS X iyo mashiinada Windows. Shirkadda ay leedahay guddi deeq optional ay website, dadka loogu dhiirigeliyo inay ku deeqaan qadar yar oo haddii ay ku faraxsanahay waxqabadka software yihiin.
Tani ciyaaryahan video aad loo jecel yahay oo si fiican u yaqaan hadda taageertaa loo maqli karo ee files ilaa 4K xalinta. Waxa ay taageertaa DivX HEVC video la plugin HEVC ah, iyo sidoo kale DivX joogto ah iyo DivX Plus. DivX Player waxaa dallacsiiyey ah media player tayo aad u sarreeya iyo mid ka mid ah xulashada ugu caansan. Qaar ka mid ah astaamaha u gaarka ah in si fiican xusid mudan la software this ay ka mid yihiin awood u leh inay si deg deg ah u kala bedesho subtitles oo ku qoran luqado kala duwan. Waxa kale oo aad si fudud uu nalku karaa iyada oo soundtracks kala duwan si ay u maqlaan qaababka sida faallo agaasimaha ee, ama sawir soconaya ee luqad kale marka la heli karo.
Waxa ay diiradda saaray samaynta soonka Weeraryahanka iyo dib u socon hawlaha sida siman sida ugu macquulsan ee DivX Player, sida ay tahay meeshii ay ciyaartoy badan muujin karaan ay tabar sida ay xirto laga yaabaa, shig-shigid, ama gebi ahaanba la ballaaran, aalladda qeexitaanka sare video files shil; gaar ahaan kombiyuutarada wax yar ka weyn.
4. Media Player Classic iyo K-Lite codec Pack
Tani waxay caan ah, furteen hoos version oo ka mid ah wax badan bulkier Windows Media Player, waa gabal aad u miisaanka yar ee software in uu yahay lacag la'aan ah, oo ma laha toolbars ama xayeysiiska soo baakadeeyey la. Si kastaba ha ahaatee, ku rakibidda Media Player Classic ku gaar ah ma aha weli ku siin 4K awoodaha loo maqli karo. Muhiimka ah waa in ay sidoo kale ku rakiban codec K-Lite ka Pack. Tani waxay si fudud waa xirmo codecs badan oo kala duwan, oo dhan soo giringiriyey ka mid ah loogu talagalay galay. Xirmo oo buuxda oo ah K-Lite codec Pack ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah Media Player Classic, sidaas darteed ma jiro baahi loo qabo in dejisan iyo rakibi in si gooni gooni ah. Version ugu dambaysay ee K-Lite ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah codecs 32-bit iyo 64-yara labada baakadda mid.
Dabeecadda miisaanka of Media Player laftiisa Classic u ogolaanaya software in la xitaa loo isticmaalaa on ugu da'da weyn ee kombiyuutarada - inkastoo uu soo laabto 4K video ciyaaro aad u baahan tahay habka awood badan.
CyberLink waxaa aad loogu yaqaanaa software video tafatirka la awoodi karo oo dareen leh, iyo sidoo kale ay DVD iyo video software loo maqli karo. PowerDVD dib ciyaari karo DVD iyo iyo Blu-ray saxanno, iyo sidoo kale wixii qaabab file video. Waxa ay taageertaa UltraHD 4K videos, kaas oo lagu sii hagaajin karaa iyadoo ay technology Laydhka TrueTheater gaar ah, oo kor u faahfaahsan iyo midabo. The feature TrueTheater isku wareejiyeen siinaysaa aad balaariyay fursadaha saarka rikoodh haddii aad rabto in aad u xidhmi doontaa tiyaatarka guriga dhamaystiran ku wareejin waayo-aragnimo dhawaaqa.
CyberLink PowerDVD PRO 14 yimaado kharash ah ilaa $ 80, taas oo ka mid ah ay taageero buuxda macaamiisha iyo helitaanka updates.
The ka badan shan barnaamijyada software oo dhan si buuxda u taageeraan 4K video loo maqli karo, iyo sidoo kale videos qaraarada kale iyo qaabab kala duwan. Kuwaasu waa ciyaaryahanada ugu da'da cusub ee 4K video. Sida video iyo aad u badan ayaa la toogtay 4K xallinta, waxa aan arki karnaa kaliya muuqaalada iyo aad u badan bac la geliyaa, iyo kuwo kale oo barnaamijyo hubin in la horumariyo si loo siiyo kama dambaysta ah waayo-aragnimo 4K daawado ee qof walba!
> Resource > Video > Top 5 4K Video Players